Joachim Löw oo ka aragti dhiibtay heshiiska uu Kai Havertz ugu biiray kooxda Chelsea – Gool FM
Joachim Löw oo ka aragti dhiibtay heshiiska uu Kai Havertz ugu biiray kooxda Chelsea
Dajiye September 6, 2020
(Yurub) 06 Seb 2020. Tababaraha xulka qaranka Germany ee Joachim Löw ayaa muujiyay sida uusan ugu qanacsaneyn heshiiska uu Kai Havertz ugu biiray kooxda Chelsea, kaddib markii uu kaga soo dhaqaaqay naadiga Bayer Leverkusen.
Joachim Löw ayaa tilmaamay in arrintan ay tahay mid aan u wanaagsaneyn sharafka horyaalka Bundesliga ee dalka Germany.
Kooxda Chelsea ayaa xaqiijiyay inay dhameystirtay heshiiska Kai Havertz, kaasoo ay naadiga Bayer Leverkusen kaga soo qaateen adduun lacageed dhan £89million, isagoo qalinka ugu duugay heshiis 5 sanadood ah.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay Joachim Löw, wuxuuna yiri:
“Waxaan u arkaa inay tahay wax xun inay ka baxaan xiddigaha hibada leh sida Kai Havertz horyaalka Bundesliga ee dalka Germany”.
“Laakiin sidoo kale waxaan arkaa waxyaabo wanaagsan, sababtoo ah Dibada, ciyaartooydu waxay horumarinayaan shakhsiyadooda”
“Waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii ku haboonaa ee Kai Havertz, si la mid ah Timo Werner, haddii ay qaadaan talaabada xigta, taasi wey na caawin doontaa”. ayuu yiri Joachim Löw.
Chelsea ayaa soo gabagabeysay heshiisyo badan oo xoogan oo ay ugu diyaar garoobeyaan xilli ciyaareedka soo socda, taas oo taageerayaasha Blues ay rajeynayaan inay bilow u noqon doonto soo celinta niyadda kooxda, haddii ay ahaan laheyn tartamada gudaha iyo Champions League.
Jadon Sancho oo ka hadlay mustaqbalkiisa iyadoo ay xiiseyneyso Manchester United
Kooxaha Arsenal, Man United, iyo Liverpool oo isku diyaarinaya inay soo qaataan xiddig ka tirsan Barcelona